Faah Faahin: Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Qarax Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Magaalada B/Weyne.
Sunday September 10, 2017 - 16:56:49 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax xooggan lala eegtay xarun maamul oo kutaal magaalada Beled Weyne.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in qarax xooggan lala helay kasoo Horjeedka xarunta maamulka magaalada Beled Weyne oo dhacda dacalka Bari ee magaalada waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay qaraxaasi.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay Mas'uuliyadda qaraxa sida ay faafisay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha, Al Shabaab waxay sheegtay in ay beegsatay isku imaatin ay ku sugnaayeen askar iyo saraakiil katirsan maamulka gobolka Hiiraan.
Ciidamo katirsan dowladda Federaalka iyo kuwa Jabuutiyaan Ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxii maanta "Lix Askari oo sedax kamid ah ay ahaayeen Jabuutiyaan ayaa ku dhintay qaraxii ka dhacay xarunta maamulka murtadiinta Beled Weyne" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in Mas'uuliyiin sarsare oo katirsanaa maamulka Hiiraan ay ku dhaawacmeen qaraxii ka dhacay magaalada Beled Weyne waxaana dhaawacyada ku jira kuwa Garaab ah.
Magacyada Saraakiisha dhaawacantay.
1- Garaad Cameey Taliyaha saadka Booliska gobolka Hiiraan
2-C/llaahi Kacaan Madaxa maaliyadda gobolka Hiiraan
3-Dhaqane Camoor Taliyaha Ciidanka isgoyska Kalabeyrka
4-Sede Maxamuud Xalane sarkaal Katirsan waaxda Maaliyadda gobolka Hiiraan
Ilo wareedyo ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxa oo ubadnaa saraakiil loola cararay isbitaal ay gacanta ku hayaan ciidamada AMISOM oo kuyaal Garoonka diyaaradaha magaalada Beled Weyne.
Magaalada Beled Weyne waxaa ku sugan kumanaan ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan ah waxaana magaalada kajira maamul loogu magac daray Hiiraanland oo uu madax u yahay Cali Cabdullaahi Cosoble.